Aogositra 2, 2018 Admin
Aostralia CoinJar mampiditra cryptocurrency tahirim-bola ho an'ny mpampiasa vola ambongadiny
CoinJar, Aostralia Bitcoin fifanakalozana, androany nandefa ny CoinJar Digital Sandam-bola Fund, ny tondro-fomba cryptocurrency tahirim-bola ho an'ny mpampiasa vola ambongadiny. Ny Fund dia manana kilasy roa; Bitcoin Class, izay manome taratra ny Bitcoin ihany; ary mifangaro Class, izay mikendry ny manara-maso ny fanatanterahana BTC, LTC, ary hafa cryptocurrencies, mavesatra ny raikitra famatsian.
Ny ekipa CoinJar mino fa fampianarana samy hanatitra ny Tahirim-bola ho mety ambongadiny mpampiasa vola hampiasa vola amin'ny fomba Aostraliana Dollars, voly hafa izay mety hanome ny fampianarana nentim-paharazana-pananana. Management saram dia 1.3% isan-annum for Bitcoin Class sy 1.8% isan-annum ho an'ny kilasy samy hafa firenena miampy fandidiana ara-dalàna ny vola lany. Fampiharana avy amin'ny ambongadiny ihany mpanjifa azo ekena any an-petra-bola. CoinJar maka amin'ny fitantanana sy ny fiarovana ny fananan'ny nomerika ho an'ny mpampiasa vola miaraka amin'ny fototra crypto antoka amin'ny multi-sonia mpanjifany.
Square nahazo $ 37M avy Bitcoin varotra amin'ny Q2
Square nitatitra vola tamin'ity herinandro ity, manambara fa ny orinasa Nahazo $37 tapitrisa avy amin'ny Bitcoin varotra endri-javatra amin'ny ataon'ny mpiara-to-mpiara-bola famindrana fampiharana, Square Cash. Tena mafy ho an'ny lafiny Square amin'ny fanitsiana ny EPS daroka vinavina ($0.13 vs. $0.11) ary ny vola miditra ka efa ho 5% avy amin'ny fanantenana ($385 tapitrisa vs. $368 tapitrisa). Total harato vola miditra dia $815 tapitrisa ao amin'ny lafiny faharoa amin'ny 2018, ny 48% taona ny taona.
Raha ny Bitcoin Square vola miditra dia niakatra tao an-tanàna ny tao an-tanàna, Square netted ~ $ 1 tapitrisa avy amin'ny endri-javatra ara-barotra vaovao, tahaka ny vidin'ny asa Bitcoin dia ~ $ 36M for Q2. Io no lehibe indrindra fanakianana ny orinasa, ny amin'izao fotoana izao ao amin'ny cryptocurrency sisin'ny asa tsy somary lehibe. Na izany aza, nomena ny amin'izao fotoana izao tontolo fitsipika, ireo vola lany dia azo inoana fa mifandray amin'ny fampiasam-bola eo amin'ny fanjakana sy ny fahazoan-dalana federaly ezaka. indrindra, ny anjara vidin'ny Square efa tamin'ny iray ranomaso tanteraka nandritra ny taon-dasa, ka efa ho 200% noho betsaka amin'ny vola mifanaraka mitempo sy bullishness noho ny orinasa mifantoka cryptocurrency vaovao.
Ny Medici Overstock inks fifanarahana amin'ny Zambian Gov amin'ny tany blockchain lisitra mpanamory fiaramanidina
Overstock ny blockchain-Powered zon'ny fananana fanampiny, Medici Land Fitantanam-pitondrana, dia voalaza fa miara-miasa amin'ny governemanta Zambiana mba hanorina blockchain-monina tany lohateny lisitra. Eo ambanin'ny fifanarahana, MLG dia hanome Zambia ny “tany fitantanana fandaharana izay manangona sy miantoka tompon'ny fananana vaovao mampiasa blockchain.” MLG dia nanaiky ny hanafaka taratasy fanamarinana ny anaram-boninahitra ao amin'ny nomerika sy vita pirinty ho an'ny firenena ny governemanta amin'ny 30 Novambra, 2018 mba ho porofon'ny hevitra ho streamlined dingana.
Overstock.com mpamorona sy ny CEO Patrick Byrne hoy ny tetikasa fa hanampy ny firenena amin'ny hetsika maneran-toe-karena izay manorina fahatokiana amin'ny alalan'ny teknolojia. Ao amin'ny iray mifandraika naoty, Byrne dia miara-miasa amin'ny Peroviana toekarena Hernando de Soto amin'ny mpiray blockchain zon'ny fananana barotra antsoina hoe De Soto Inc. Ny raharaham-barotra dia mikendry ny hanome tolotra nandritra ny dimy miliara olona ka hanome azy ireo ny fidirana amin'ny tsena maneran-drenivohitra.
Fampiasam-bola ao amin'ny governemanta Aostraliana crypto hampiroboroboana ny fizahan-tany startup mba
Ny governemanta Aostraliana mikasa ny hamoaka anie ny crypto startup ho anisan'ny $8 tapitrisa ny zava-baovao fanohanana ara-bola. Ny TravelbyBit niomerika vola fandoavam-bola ho an'ny sehatra Travel orinasa sy ny fizahan-tany dia iray 70 orinasa izay mandray “Advance Queensland handrehitra Hevitra” famatsiam-bola, izay manohana mpandraharaha any Queensland mba hampivelatra ny raharaham-barotra.
Ny tanjon'ny orinasa dia ny hampitombo ny isan'ny mpizaha tany any Afovoany Queensland avy amin'ny fivarotana Travel tolotra amin'ny cryptocurrencies sy famoronana asa bebe kokoa. Innovation Minisitry Jones Kate nanao hoe:: "TravelbyBit dia nihevitra ny fomba feno hafetsena mba ho mora kokoa amin'ny mpitsidika ny fanjakana mba handoavana ny fividianana amin'ny mitsaha-mitombo isa ny orinasa eo an-toerana manaiky cryptocurrency fandoavam-bola… Azoko tsara TravelbyBit dia mikendry manokana toerana toy ny Bundaberg (manamorona ny Great Barrier Reef) - mampiasa cryptocurrency mba ho mora kokoa ho an'ny mpizaha tany ny boky fety. "
Crypto Breziliana fifanakalozana mandresy didy manohitra banky izay nanakatona ny kaontiny
Breziliana cryptocurrency fifanakalozana Walltime vao haingana nahazo fitsarana ady amin'ny fahavalo banky eo an-toerana Caixa Economica Federaly, manery azy ny kaontiny unfreeze mitazona mihoatra noho ny $200,000 danja ny vola. Walltime nahazo mialoha ny didy, izany hoe ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia tsy mbola farany, fa na izany aza mamela ny fifanakalozana mampiasa ny vola ao amin'ny kaonty foana ny fanompoana mpanjifa ao amin'ny vonjimaika.
Walltime tsy nahazo fandraisana mpanjifa mipetraka satria ny vola dia malalaka & Voalaza fa fahavoazana nijaly nandritra izany fotoana izany. Ny mpampanoa lalàna Walltime hoy ny fahaverezana mihoatra ny $ 250K izay niraikitra tao amin'ny tantara ao amin'ny Caixa Economica & ihany "inoana ho avy onitra hetsika" hahita izany recoup azy ireo. Walltime ny raharaha an'i Caixa Economica fitoriana indray dia tamin'ny fiandohan'ny Aprily tamin'ity taona ity, toy ny milaza ny "kaonty any amin'ny banky dia voasakana tsy misy filazana na fanamarinana" tamin'ny faha-22 Martsa. Araka Wall roa Time ny mpisolovava, ny banky ny mihetsika hanafika toromarika napetraky ny banky foibe Brezila.
SBI fampiasam-bola $ 9m amin'ny rafitra kilasy cryptocurrency Dérivés sehatra
Zavatra ara-bola asa goavana no vola SBI Holdings $9 tapitrisa ao Etazonia Hafanàm-po an-tsena maritrano Clear Markets mba bola ny famoronana ny sehatra ara-barotra Sampanteny cryptocurrency naorina ho an'ny rafitra mpampiasa vola. SBI Crypto Investment efa mahazo 12% tsatòka in Clear Markets, izay ny foibeny any Charlotte, NC ary manana biraon'ny sampana in NYC, London, sy Tokyo. SBI voalaza fa karama 1 lavitrisa Yen ($9 tapitrisa) noho ny vitsy an'isa fananana toerana ao amin'ny orinasa.
Ao amin'ny famatsiam-bola Clear Markets, SBI mikendry ny hanorina Sampanteny fifanakalozana izay mamela ny andrim-mpampiasa vola hanakalo ny fampiasam-bola vokatra mifatotra ho any ny vidiny sy ny fihetsiky ny hafa Bitcoin cryptoassets. toy izany entana, izay mety ahitana hoavy, safidy, ary swaps, mamela ny andrim-panjakana mba nofefenao toerana hafa mba hananany ao amin'ny cryptocurrency tsena, fampihenana ny mety sy hahafahan'izy ireo mba hanidy amin'ny tombom-barotra na fanalefahana losses.The teny vaovao ho ao an-tsena custodians & ny fampandrosoana ny sehatra vaovao no antenaina mba hanome andrim-panjakana bebe kokoa mandinika ny fomba hahazoana hatsiaka ny cryptoassets.
Lukas hoy i:
Aogositra 20, 2018 amin'ny 8:02 PM